Welcome to MMSE | MMSE
လုပ်ငန်းတာဝန်များ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Read More ညွှန်ကြားချက်များ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အသေးစားငွေရေးကြေးရေ:လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၇ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အသေးစားငွေရေးကြေးရေ:လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၆ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း သင်တန်း
Insurance Supervision Training ၁။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် World Bank Group တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် Insurance Supervision Training For FRD သင်တန်းအား ၈-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၁၁-၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ နေပြည်တော်ရှိ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ( ၃၄ ) စုပေါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာစန္ဒာဦးမှ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Read More မူလအစ
လိုင်စင်ရ အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ ့အစည်းများ
အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
Sky-net Media နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း Sky-net Media နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Read More Media များနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း Read More ၁၂-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍရှင်းလင်း တင်ပြခြင်းနှင့် အခြေခံငွေကြေးအသိပညာပေး စာစောင်ထုတ်ဝေခြင်းအခမ်းအနား ပြည်သူများအကြား ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်များ ၊ စုဆောင်းငွေများ စုဆောင်း တတ်စေရေး ၊ ချေးငွေပြန်လည် ပေးဆပ်ရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေများ မျှတစွာသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ငွေကြေးအသိပညာပေးစာစောင် Pamphlet များ ဖြန့်ဝေခြင်းအခမ်းအနားကို UNOPS (LIFT Fund) နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၁၂-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Read More အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ More Links
www.myanmartradenet.com.mm www.mofr.gov.mm www.myanmarcustom.gov.mm www.cbm.gov.mm www.mebank.com.mm www.irdmyanmar.gov.mm အစည်းအေ၀း
Read More တွေ့ဆုံမှု
အတွင်းရေးမှူး ဦးထိန်လင်းအား Commercial Credit အဖွဲ့အစည်းမှ မေးမြန်းဆွေးနွေး ၂၀.၂.၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးထိန်လင်းအား Commercial Credit အဖွဲ့အစည်းမှ အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ လာရောက်ကာ.....
Read More အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Workshop on Ownership Policy and Governance Framework for State Owned Banks နှင့်ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲ Kempinski Hotel ၌ World Bank မှ ကြီးမှူးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် Workshop on Ownership Policy and Governance Framework for State Owned Banksနှင့် ပတ်သက်သော ဆွေးနွေးပွဲ
Read More Copyright©2013. All rights reserved. Developed by Bagan Innovation Technology.